ताप्लेजुङमा बजेटको वर्षा, कहाँ-कहाँ भयो विनियोजन ? « Drishti News – Nepalese News Portal
ताप्लेजुङमा बजेटको वर्षा, कहाँ-कहाँ भयो विनियोजन ?
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २ : ३२ मा प्रकाशित
फुङलिङ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ योजनामा ताप्लेजुङका २९ वटा आयोजना समेटिएको छ । छनोट भएका आयोजनाहरुमा मन्त्रालयले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन विभागमार्फत मिक्वाखोलास्थित माङ्गेना याक विशेष पर्यटन ग्राम निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ । पाथिभरा क्षेत्रमा पर्यटकीय विश्रामस्थल, उद्धार केन्द्र निर्माण गर्न क्रमागत बजेट रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै किरात धर्मालम्बीहरुको पवित्र स्थल फक्ताङ्लुङ क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण रु एक करोड विनियोजन भएको विभागले जनाएको छ ।
पुरातत्व विभागमार्फत फुङलिङ-३ को मुक्तेश्वरनाथ मन्दिर संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न रु १० लाख विनियोजन भएको छ । शिवालय मन्दिर संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि आठराई त्रिववेणी गाँउपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी विभागले मैवाखोला-२ को साङगेछयोलिङ गुम्बा मर्मतका लागि रु १० लाख, फक्ताङालुङ-६ को दिकिछ्योलिङ गुम्बा निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न रु एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै पाथीभरा मन्दिर परिसर सत्तल र परिसर संरक्षण लागि रु ५० लाख विनियोजन र फुङलिङ–६ को पन्चकन्या सेतिदेवी मन्दिर रु २० लाख विनियोजन भएको विभागले जनाएको छ ।
चारपाटे ढुङगा तथा शिवालय क्षेत्र संरक्षण गर्न रु १० लाख, मैवाखोला-५ स्थित ङिमा ङयायुरगुम्बा संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न रु १० लाख, मैवाखोला-२ कालिदेवी मन्दिर संरक्षण तथा पूर्वाधार गर्न रु १० लाख, मैवाखोला-१ को सिंहदेवी नागपोखरी संरक्षण तथा सम्बद्र्धन रु.१५ लाख र आठराई त्रिवेणी-१ को पेमदावा छ्योलिङ साङ गुम्बाका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको विभागले जनाएको छ ।
फुङलिङ-३ को तिनबरेदेखि इन्डियन वेलफेयरसम्म पदमार्ग निर्माण मा .रु १५ लाख र फुङलिङ-१० मा चुच्चे ढुङ्गा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न रु १५ लाख विनियोजन गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।